मेलमिलाप दिवसको अवसरमा जिल्लाभर विविध कार्यक्रम | Janaandolan
Home समाचार मेलमिलाप दिवसको अवसरमा जिल्लाभर विविध कार्यक्रम
मेलमिलाप दिवसको अवसरमा जिल्लाभर विविध कार्यक्रम
विर्तामोड १६ पुस । नेपाली कांग्रेसले आज मेलमिलाप दिवस मनाएको छ । राष्ट्रिय संकट आइपरेका बेला आस्था र विचारभन्दा माथी उठेर देशमा क्रियाशील राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित निर्वासनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद (वी.पी.) कोइराला २०३३ साल पुस १६ गते मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थामाथि कू गरेका थिए । त्यसैबेलादेखि लगभग ८ बर्ष बढीको कठोर जेलजीवन विताएका वी.पी.सहितका कांग्रेस नेताहरुलाई तत्कालीन सरकारले झुटा मुद्दा लगाउँदै निर्वासनको सजाँय दिएको थियो
यता कचनकबल–७ मा पनि वी.पी. र उहाँले लिनुभएको मेलमिलाप नीतिबारे चर्चा गरिएको छ । वार्ड सभापति भरत राजवंशीको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । भद्रपुर–८ मा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सांसद ओमप्रकाश सरावगी, नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य गोमा भटराई, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य लता कार्की, जे।पी। शर्मा, क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
झापाका १५ वटै गाउँ/नगरका १३१ वटै वडामा नेपाली कांग्रेस वडा समितिले आयोजना गरिएको मेलमिलाप दिवसलाई जिल्लाबाट खटाइएका प्रतिनिधिहरुले सम्बोधन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाको यसअघि सम्पन्न बैठकले सबै वडामा प्रतिनिधि खटाएको थियो । जिल्लाका पार्टी पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय तथा प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई प्रतिनिधि पठाइएको थियो ।
Previous articleकालिकापीठको १७ औं बार्षिक अनुष्ठान शुरु
Next articleनेतृत्व विकास तथा योजना छनौट सम्बन्धी ५ दिने तालिम शुरु
समाचार मेलमिलाप दिवसको अवसरमा जिल्लाभर विविध कार्यक्रम